Izindaba - Izindaba zokuqala Ziyini izici zokuhlanganiswa okuhlangene kwendawo yonke?
Izindaba zokuqala Ziyini izici zokuhlanganiswa okuhlangene kwendawo yonke?
Ukuhlanganiswa kwendawo yonke kusebenzisa izici zomshini wayo
i-torque nokunyakaza kungadluliselwa ngokuthembekile. Izici zokuhlangana kwendawo yonke yilezi: isakhiwo sinama-engeli ahlukile angena, futhi ama-axial amabili afakiwe ama-engeli wokuhlanganiswa kwendawo yonke ahlukile, imvamisa aphakathi kuka-5 ° -45 °.
Ukusetshenziswa kokuhlanganiswa okuhlangene jikelele
Ekudlulisweni kwamandla okushesha kakhulu nokusindayo, okunye ukuhlangana kunama-buffers, futhi ngaphansi kwesimo sokuthambisa, kwenziwa ukujikeleza ndawonye ukudlulisa izingxenye zomshini wejubane eliguqukayo. Futhi uthuthukise ukusebenza okunamandla kokushefa. Ukuhlanganiswa kwakhiwa izingxenye ezimbili, ezixhumene ngokulandelana ne-shaft yokushayela kanye ne-shaft eqhutshwa. Ngokuvamile, imishini yamandla ixhunywe kakhulu ngokuhlanganiswa nemishini yokusebenza.
Kunezinhlobo ezithile zokuhlanganiswa okuhlangene kwendawo yonke
Ukuhlanganiswa kunemiphini emibili exhunyiwe. Ngenxa yamaphutha wokukhiqiza nawokufaka, ukushintshwa kwangemuva kokushintshwa kanye nezinga lokushisa, ukuma okuhlobene kwemiphini emibili kuzoshintsha, futhi ukuqondanisa okuqinile kaningi akuqinisekisiwe. Izinhlanganisela, noma ngabe zinekhono lokunxephezela ukufuduswa okuhlobene okuhlukahlukene, okungukuthi, noma ngabe kungagcina umsebenzi wokuxhuma kanye nenhloso yokuhlangana ngaphansi kwesimo sokufuduswa okuhlobene. Ukubhangqa kungahlukaniswa kube yizixhumi eziqinile, izixhumi eziguquguqukayo nokuphepha kokuhlangana. Izinhlobo eziyinhloko zokuhlanganiswa, izici nendima yazo esigabeni samazwana ohlelweni lokudlulisa
Ukuhlangana okuqinile kungadlulisa kuphela ukunyakaza ne-torque ngaphandle kweminye imisebenzi, kufaka phakathi izixhumi ze-bidirectional, imikhono ye-sleeve, i-clamp couplings, njll.
Ukuhlangana okuguquguqukayo Ukuhlangana okuguqukayo ngaphandle kwezakhi ezinwebeka akukwazi ukudlulisa ukunyakaza ne-torque kuphela, kepha futhi kunezigaba ezahlukahlukene zesingeniso. Ukusebenza kwesinxephezelo se-radial ne-angular kufaka phakathi ukuhlangana kwamagiya, ukuhlangana kwendawo yonke, ukuhlangana kwe-Chain, ukuhlangana kwesilayidi, ukuhlangana kwesifudumezi, njll.
Ukuhlangana okuguqukayo nezinto ezinwebekayo kungadlulisa ukunyakaza ne-torque; inamazinga ahlukahlukene okusungulwa, ukusebenza kwe-radial and angular compensation; ibuye ibe namazinga ahlukene okwehliswa kokudlidliza nokubhafa, ukwenza ngcono ukusebenza kohlelo lokudlulisa kufaka phakathi izixhumi ezahlukahlukene eziguquguqukayo ezinezakhi ezinwebekayo ezingezona ezensimbi kanye nokuhlangana okuguqukayo okunezinsimbi okunwebeka kwensimbi. Ukwakheka kokuhlanganiswa okunwebeka okuhlukahlukene kuhlukile, ukuqhutshwa kwehlukile, nendima ohlelweni lokudlulisa nayo yehlukile.
Ukuhlangana okuphephile kwe-Flexible nakho kunamazinga ahlukene wokusebenza kwesinxephezelo, kufaka phakathi uhlobo lwephini, uhlobo lokushayisana, uhlobo lwe-magnetic powder, uhlobo lwe-centrifugal, uhlobo lwe-hydraulic nokunye ukuhlangana kokuphepha
Ubukhulu nokuqondiswa kokufuduswa kwesihlobo kwamazembe amabili. Lapho kunzima ukugcina ukuqondanisa okuqinile nokunemba kwemiphini emibili ngemuva kokufakwa nokulungiswa, noma lapho imishayo emibili izophazamisa ukufuduswa kwesihlobo okwengeziwe ngesikhathi sokusebenza, ukuhlangana okuguqukayo kufanele kushintshwe. Isibonelo, lapho ukufuduka kwe-radial kusesiqondisweni se-axial, kungakhethwa ukuhlangana kwesilayidi, futhi ukufuduka kwe-angular okungena noma ukuwela imiphini emibili kungaxhunyaniswa nokuhlangana kwendawo yonke.
Ukuthembeka kanye nemvelo yokusebenza yokuhlangana. Ukubhangqa okungadingi ukuthambisa ngokuvamile kwenziwa ngezinto zensimbi futhi kunokwethenjelwa kakhulu; ukuhlangana okudinga ukuthambisa kuthinteka kalula ngezinga lokuthambisa futhi kungangcolisa imvelo. Ukubhangqa okuqukethe izinto ezingezona zensimbi ezifana nenjoloba kuyazwela ekushiseni, imidiya ekonakalisayo nokukhanya okuqinile, futhi kuthanda ukuguga.
Ngenxa yezizathu ezinjengokukhiqiza, ukufakwa, ukuguquguquka kwemithwalo nezinguquko zokushisa, kunzima ukugcina ukuqondanisa okuqinile nokunemba kwemiphini emibili ngemuva kokufakwa nokulungiswa. Kunezinga elithile lokufuduswa kumikhombandlela ye-x ne-Y ne-angle deflection CI. Lapho ukufuduka kwe-radial kukhulu, ukuhlangana kwesilayidi kungakhethwa, futhi ukufuduka kwe-angular okungena noma ukuwela imiphini emibili kungaxhunyaniswa nokuhlangana kwendawo yonke. Lapho imiphini emibili ikhiqiza ukufuduswa kwesihlobo okwengeziwe ngenxa yokuphazamiseka ngesikhathi sokusebenza, kufanele kukhethwe ukuhlangana okuguquguqukayo.